M4MOVIES - | Kavyalaya - काव्यालय
Friday with MYSTERYTELLERसिनेमा
M4MOVIES
by रितेश बैशाख १९, २०७७
लकडाउन समय !
सरकारले लकडाउन घोषण गरेपछि एकाएक तरङ्ग फैलियो । भाइरसको भय थियो/छ नै, आफूभित्रको एउटा कुनामा अलिकति भएपनि खुशी दौडियो । उत्साहित भएँ । कम्तिमा समय मिल्यो, पाएँ ।
आफूले आफैँलाई समय । परिवारसँग समय । बुक-सेल्फमा पढ्न बाँकी किताबहरु आधि दर्जनभन्दा बढी थिए । वाच-लिस्टमा अल्झिएर बसेका कैयौं फिल्म/सिरिजहरु थिए । लेख्ने कुनै/केही योजना बनाइनँ । बस्, पढिन्छ, हेरिन्छ । रमाइलो गरिन्छ ।
किताबहरु पढी सकाएँ । वाच-लिस्टका लगभग सबै फिल्म/सिरिजहरु हेरेर सकेँ । लकडाउन थपिँदै गयो । उत्साहित म उत्साहहीन हुँदै गएँ । समय आफैँलाई धेरै हुन थाल्यो । भन्नु त नहुने हो, समय आफैँलाई धेरै भयो । समय भनेको आयु हो । हामी धेरै भन्दा धेरै समय बाँच्न चाहन्छौँ । थोरै किन नहोस्, सुन्दर र मीठो छोटो पलपनि कैयौं वर्ष बराबर हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा यस्तो फिल्मी डाइलग भन्न पनि डर लाग्छ बाबै ! विश्वमा फैलिरहेको भाइरसको चाँडो भन्दा चाँडो अन्त्य होस् । ]
चिनीपनि धेरै सेवन गरेपछि पक्कै तितो हुन्छ । परिवारसँग झ्याउ लाग्न थाल्यो । अफिसलाई सम्झिन थालेँ । काम सम्झिन थालेँ । साथीहरूलाई खुब मिस गर्न थालेँ । चिया-अड्डा । सिनेमा-हल । भेटघाट । कार्यक्रम । सब्बै-सब्बै मिस गर्न थालेँ/गरिरहेको छु ।
च्याटमा कहिल्यै कुरा गर्न मन लागेन/लाग्दैन । भ्वाइस मेसेज पनि कत्ति गर्नु ? भिडियो कलका लागि नेट सधैँ कहाँ छिटो चल्छ र ! साथीहरूले लुडो खेलौँ भन्थे । केहीदिन खेलेँ । आफूलाई मारेको मार्यै गर्ने ! पछि-पछि झ्याउ लागेर आयो । लुडोको प्रस्ताव पनि ठुक्राउन थालेँ ।
मोबाइल कत्ति चलाउनु ! के चलाउनु ! जताततै कोरोनाको खबर । फेसबुकभरि अनेक-अनेक ट्रेन्ड चलिरहेको देख्थेँ/देख्छु । दिक्दार लाग्न थाल्यो/लाग्छ । फिल्म/सिरिज सिफारिस गर्नेहरुको लर्को देखियो/देखिरहेको छु । वाच-लिस्टमा राख्दै, थपिँदै गयो । कहिले हेर्नु त्यति धेरै !
लेख्ने मनोदशा बनाएर लेख्ने कोसिस गर्थेँ । कहाँ सक्नु ? कन्सन्ट्रेट नै नहुने ! समय-परिस्थिति नै यस्तो छ डिस्ट्र्याक्ट भै’हालिने !
मेरो सुत्ने र उठ्नेको तालिका नै बिग्रियो । कहिले मध्यरातमा निद्रा खुल्थ्यो, अझै खुल्छ । के गरूँ-गरूँ हुन्थ्यो/हुन्छ । कानमा हेडफोन कोचेर सेन्टी गित सुनेर निदाउने प्रयत्न गर्थेँ, अझै गर्छु । तर, कहाँ निदाउनु ? युटुबमा टम एन्ड जेरि हेर्थेँ । हाँसो आउँथ्यो निद्रा आउँदैन्थ्यो ।
बिहानको खाना गाँजा जस्तै लाग्थ्यो/लाग्छ । खाएपछि मज्जाले लठ्ठिने । अनि मज्जाले सुत्थेँ/सुत्छु । ब्यूँझिदा आधी घण्टापनि चुहिएको हुँदैन्थ्यो/हुँदैन । कस्तो खालको गाँजा ! फेरि छट्पटी हुन्थ्यो/हुन्छ । मोबाइल समायो, छोड्यो ! फेरि समायो !! फेरि छोड्यो !!!
सरकारले, कति हो करोड बराबरको राहत बाडिसकेको खबर आउँथ्यो । कुहिएका खाद्यसामाग्री दिइएको खबर पनि सुन्थेँ / सुनिरहेको छु । राहत नपाएर कराइरहेका, रोइरहेका खबर पनि आउँथ्यो/आइरहन्छ । नेताहरु सरकार उठाउने र भत्काउने खेल खेलिरहेको देख्थेँ/देख्छु । सरकारलाई स्ट्यान्डिङ अवेशन दिन मन लाग्थ्यो ।
दिनभरि के गर्ने त ? अन्तिममा एउटै उपाय निस्कन्थ्यो, फिल्म ! फिल्म हेर्यो, बस्यो । तपाईंहरुको पनि दिनचर्या मेरोभन्दा फरक पक्कै नहोला । घरभित्रै रहनुस्, फिल्म हेर्नुस् ।
केही फिल्म ( फरक ) सिफारिस गर्न चाहन्छु ।
स्टन्ट-म्यान ‘रोय’ स्टन्ट गर्दा घायल हुन्छन् । उनी अस्पतालमा भर्ना हुन्छन् । उनको भेट एउटा सानो बच्चीसँग हुन्छ जो आफ्नो हात भाच्चिएर भर्ना भएकी हुन्छिन् । दुईको मित्रता हुन्छ ।
‘रोय’ले बच्चीलाई कहानी सुनाउन थाल्छ । बच्ची चाख दिएर कहानी सुन्न थाल्छिन् । कहानीका काल्पनिक पात्रहरु उनलाई वास्तविक लाग्न थाल्छ । उनी बिस्तारै कहानीमै हराउन थाल्छिन् । कहानीमै जिउन थाल्छिन् । यसरी यथार्थ र काल्पनिक कहानी समानान्तर भएर अघि बढ्दै जान्छ ।
‘रोय’ले कस्तो कहानी सुनाउँदै थियो ? किन सुनाउँदै थियो ? फिल्म हेर्नुस् । अत्ति मिठो र सुन्दर छ । मार्मिक छ । तपाईंको तन, मन दुवैलाई छुन्छ ।
‘इन्सेप्सन’ नहेर्ने को नै होलान् र ! ‘इन्सेप्सन’ मन पराउनेहरुले यो फिल्म मन नपराउने कुरै हुँदैन ।
‘गिलर’ एक गेम डिजाइनर हुन् । उनले नयाँ गेमको आविष्कार गरेकी छिन् । एउटा कार्यक्रममा नयाँ गेमको अभ्यास/प्रयोगको क्रममा एक घटना घट्न पुग्छ । भागाभाग हुन्छ । सेक्युरिटी गार्डले गिलरलाई सुरक्षितसँग बाहिर ल्याउँछन् । गेम खराब भयो/बिग्रियो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ गिलरलाई । गिलरले आफू र सेक्युरिटी गार्ड दुवैमा त्यो गेम प्रयोग गर्छ । उनीहरु गेमको दुनियाँमा पस्छन् ।
अब के हुन्छ ? उनीहरुले गेमको दुनियाँमा क-कसलाई भेट्छन् ? उनीहरुले कस्तो संघर्ष गर्नुपर्छ ? के उनीहरु त्यो दुनियाँबाट निस्कन सक्षम हुन्छन् ?
चौधौं शताब्दीको जापान । गृह-युद्धको समय ।
सासु र बुहारी मिलेर युद्धबाट भागेर आएका सिपाहीहरुलाई जालमा थापेर मार्ने गर्छन् । सिपाहीका लत्ताकपडा, गहना, कवज, हतियार बेचेर आफ्नो गुजारा गर्ने हुन्छन् ।
उनीहरुको परिवारको एक सदस्य (छोरा/लोग्ने) पनि युद्धमा गएको हुन्छ । ऊ युद्धमै मारिएको खबर अर्को एक आफन्तले (भगौडे सिपाही) लिएर आउँछ । त्यो आफन्त र बुहारीको बिस्तारै प्रेम बस्न थाल्छ ।
सासुले आफ्नी बुहारीबाट टाढा रहन उसलाई धम्की दिन्छ । उनीहरुको सम्बन्ध देखेर सासुलाई रिस उठ्छ, ईर्ष्या जाग्छ । भगौडे सिपाहीबाट आफ्नो बुहारी छुटाउन सासु कुन हदसम्म पुग्छिन् ? के-के गर्छिन् ? कस्तो जाल थाप्छिन् ?
फिल्मले मज्जाले तर्साउँछ । मलाई जस्तै तपाईंलाई पनि पक्कै हल्लाउनेछ । मैले हेरेको धेरैभन्दा धेरै खत्रा हरर फिल्ममा पर्छ यो ।
एउटा चोर र बाम-पुड्केको मित्रता हुन्छ । उनीहरु मिलेर पैसा कमाउन थाल्छन् । एकदिन चोरले एउटा अग्लो टावर देख्छ जहाँबाट सर्व-साधारणलाई सुन बाडिरहेको हुन्छ । चोरलाई सुनको स्रोत खोज्न मन लाग्छ । जान्न मन लाग्छ । ऊ आफ्नो साथीलाई छाडेर टावर चढ्छ । टावरमा उसले कसलाई भेट्छ ? के हुन्छ अब ?
जति बयान/बखान गरेपनि साध्य छैन फिल्मबारे । यो पक्कै नछुटाउनुस् । यो फिल्मले कल्पनाको आकाशमा उड्न खोज्नेहरुलाई यथार्थको सुन्दर धरातल देखाइदिन्छ । फिल्म खोजको, आफ्नो खोजको ।
फिल्म धेरै कोणबाट अजबको छ । गजबको छ । फिल्मले परिभाषा दिन्छ, जिन्दगीको !
एक दम्पतीले आफ्नो भव्य भवनमा रात्री-भोजको आयोजना गर्छ । पाहुनाहरु बिस्तारै आउन थाल्छन् । एउटा स्टाफ बाहेक अरु सबै स्टाफहरु विभिन्न कारण देखाएर भवनबाट निस्किन्छन् । जागिर छाड्छन् ।
रात्री-भोज समाप्त हुन्छ । तर, पाहुनाहरु कोहीपनि आ-आफ्ना घर जाने मनोदशा बनाउँदैनन् । सबैले रात त्यहीँ गुजार्छन् । अर्को दिन पनि कोहि पनि घर छाड्न मान्दैनन् । एक‍ प्रकारले ती सबै पाहुनाहरु त्यस भव्य भवनमा कैद हुन्छन् । भवनमा खाना, पानीको अभाव हुन थाल्छ । पाहुनाहरु झगडा गर्न थाल्छन् ।
आखिर भवनमा कसरी कैद भए पाहुनाहरु ? बाहिरका मान्छेहरु पनि किन भवनभित्र आउन सक्दैनन् ? भवन भित्र अब के हुन्छ ?
यो अजीवको फिल्मले सम्मोहित गरिदिन्छ । एक जबर्जस्त सरियलिस्टिक फिल्म !
नाटककार ‘बार्टन’लाई हलिउडबाट अफर आउँछ, फिल्म लेख्ने । उनी हलिउड जान्छन् । एउटा सस्तो होटलमा बस्न थाल्छन् । उनलाई रेस्लिङमा आधार भएर स्कृप्ट लेख्न भनिन्छ जसको आइडिया उनीसँग कत्तिपनि हुँदैन ।
उनी लेख्न सक्दैनन् । अर्को कोठाबाट आउने लगातार आवाजले उनको ध्यान भंग हुन्छ । होटलमा कम्प्लेन गर्छन् । अर्को कोठामा बस्ने छिमेकी आएर माफी माग्छन् । उनीहरुको मित्रता हुन्छ ।
अब के हुन्छ ? उनले लेख्न सक्छन्, स्कृप्ट ? उनको छिमेकीले कस्तो रहस्य बोकेको छ ?
यो साइकोलोजिकल थ्रीलरले मज्जाले समात्छ ।
दुई कहानी बग्छन् यो फिल्ममा ।
एक- पुलिसले दुई अपराधीलाई एक बिल्डिङमा समात्छ । अपराधीहरु भाग्छन् । पुलिसले गोली चलाउँछ । एकको खुट्टामा लाग्छ र घायल हुन्छ । दुवैलाई लिएर भर्याङ ओर्लिँदै पुलिस बिल्डिङ बाहिर जान खोज्छ । तर, भर्याङ जति ओर्लिए पनि सकिँदैन । उनीहरु बिल्डिङ्गमै फस्छन् ।
दुई- एक परिवार रोड ट्रिपमा निस्किएका छन् । बिच बाटोबाट उनीहरु छोरीको औषधी लिन घर फर्किन्छन् । तर, रोड कहिल्यै समाप्त हुँदैन । उनिहरु रोडमै फस्छन् ?
कसरी ? किन ? यी दुई कथामा के सम्बन्ध छ ?
पत्ता लगाउन फिल्म हेर्नुस् !
‘सटर केन’ एक चर्चित हरर लेखक, जो हराएका छन् । उनका हरर किताब पढेपछि मान्छे पागल हुन्छन् । याददास हराउँछन् । हिंस्रक बन्छन् । उनको अर्को नयाँ किताबका लागि पाठकहरु व्यग्रतासँग प्रतीक्षामा छन् ।
मुस्किलले लोकेसन पत्ता लगाएर विमाका एक अनुसन्धानकर्ता र सम्पादक, लेखक खोज्न निस्किन्छन् । उनीहरु लेखक भएको ठाउँमा पुग्छन् । उनीहरुलाई बल्ल थाहा हुन्छ, त्यो ठाउँ लेखककै किताबहरुमा जिकिर भएको काल्पनिक ठाउँ हुन्छ भन्ने ।
त्यो ठाउँमा अनेक प्रकारका अजीव घटनाहरु घट्न थाल्छन् । सबै लेखकको किताब भित्रका घटनाहरु । अनुसन्धानकर्ता र सम्पादक अचम्मित हुन्छन् । अब के हुन्छ त ?
यो हरर थ्रीलर अचम्मैको छ । खत्रा छ ।
एक सेबेस्टियन युवक फ्रान्समा आप्रवासी भएर रहिरहेका छन् । उनी ‘गोडन’को घरमा छतको मर्मत गर्ने काममा हुन्छन् । ‘गोडन’ जो मर्फिनको कुलतमा छन् । उनको घर प्रहरी नीरक्षणमा रहेको छ ।
ओभरडोजले गोडनको मृत्यु हुन्छ । गोडनको नामका आएको चिठी छत मर्मत गरिरहेको युवकले चोर्छ । चिठीमा एउटा रहस्यमयी काम र त्यो बापत थुप्रै पैसा कमाउने लेखिएको हुन्छ । गोडनको ठाँउमा त्यो युवक जान्छ त्यो रहस्यमय काममा ।
त्यो रहस्यमय काम कस्तो हुन्छ ?
जब थाहा पाउनुहुन्छ तपाईंको होस उड्नेछ ।
Axone: Transcending racism with food asametaphor
चार भाषा र विधामा चलचित्र; चार चलचित्र
TUMBBAD | THE ALTERNATE ENDING AND WHAT IF?
निर्वाक | भिजुअल स्टोरीटेलिङ
रंग संवाद; महान थापासँग
सिनेमाको अवचेतन शक्ति
गान्धीजीसँग तीन सदस्य
दशैं र खलबल (भाग-१ ) : जमरा देखि चङ्गासम्म